जम्मु कश्मिरमा सम्पादकको गोली हानी हत्या – MeroJilla.com
जम्मु कश्मिरमा सम्पादकको गोली हानी हत्या
जम्मु–कश्मिरको राजधानी श्रीनगरमा वरिष्ठ पत्रकार तथा राइजिङ कश्मिरका सम्पादक शुजात बुखारीलाई अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको छ। प्रहरीका अनुसार बुखारी श्रीनगरमा लाल चोक सिटी सेन्टरस्थित आफुनो अफिस प्रेस इनक्लेव निस्किएर एक पार्टीमा जाने तयारी गरिरहेको अवस्थामा अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको थियो।
४८ वर्षीय शुजात बुखारी राइजिङ कश्मिरका सम्पादन बन्नुअघि १९९७ देखि २०१२ सम्म कश्मिरमा ‘द हिन्दू’ पत्रिकाका संवाददाता थिए। पत्रकार हुनुकासाथै उनी कश्मिरको स्थानीय भाषालाई जिवित राख्न एक अभियान पनि चलाइरहेका थिए।
शुजात बुखारीमाथि २००० मा पनि आक्रमण भएको थियो। त्यसपछि उनलाई प्रहरीले सुरक्षा दिन थालेको थियो। कश्मिरमा शान्ति स्थापना गर्न बुखारी लामोसमयदेखि सक्रिय थिए।
भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘राइजिङ कश्मिरका सम्पादक शुजात बुखारीको हत्या कायरताको नाम हो। यो कश्मिरको विचारशील आवाजलाई दबाउने कोशिश हो। उनी एक साहसी र निडर पत्रकार थिए।’
जम्मु–कश्मिरका मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले ट्विट गर्दै भनेकी छन्, ‘शुजात बुखारीको अचानक मृत्युले निकै दुखी छु। आतंक ईदको पूर्व संध्यामा आफ्नो सिर उठाएको छ। म दृढातापूर्वक हिंस्रक कार्यको निन्दा गर्छु।’
प्रधानमन्त्री ओली र सिके राउतले एउटै मञ्चबाट सम्वोधन गर्ने !	Friday, March 8th, 2019
भाग्य आफ्नो आफ्नो मुकेश अम्बानीको छलाङ, भाइ अनिल भयंकर आर्थिक संकटमा	Friday, March 8th, 2019
भारतीय पाइलटले सोधे– यो भारत हो कि पाकिस्तान ? दुखद तर रमाइलो कहानी	Friday, March 1st, 2019